पैसा भएकाहरू सँगको बसउठ र रसरंगमा मात्र जोड किन ? — News of The World
सन्तोष शर्माआश्विन ८, २०७४
बैठकमा मुख्य एजेण्डा नै यहि हो कामरेडहरू’ प्रदेश पार्टीका संयोजक कमरेड ध्रुवले एजेण्डा प्रष्ट्याउन खोजे ।
‘हामीले दुई चरणको निर्वाचन पछि पनि राम्रोसँग चेतेका छैनौँ । हामी आफैं सतही छौँ कामरेडहरू, आजको बैठकबाट हामी गम्भीर, जवाफदेही र सृजनात्मक हुन सक्नै पर्दछ’ स्वागत मन्तव्य दिँदै कामरेड ज्वालाले धारणा समेत राखिन् ।
‘कामरेडहरू अब पालैपालो आ–आफ्ना धारणा राखौं न त’ उद्घोषक समेत रहेका कमरेड ध्रुवले फ्लोर ओपन गरे ।
‘पार्टी निकै कमजोर भएको, कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको र दुश्मन हाँसिरहेको बेला अध्यक्ष कमरेडबाटै ‘विघटन’को शब्द प्रयोग हुनु राम्रो हो र ?’ कामरेड सलिनाले जिज्ञासा राखिन् ।
‘आफू र आफ्ना सन्ततिलाई पुग्ने पैसा जम्मा गरिसकेको, आन्दोलनको बलबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री खाइसकेको र राज्यको प्रमुख व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित भैसकेपछि अब उनलाई किन झन्झटमा फस्नुप¥यो…! विघटन गर्न पनि सक्छन्…दुश्मनहरूको यस्तो आंकलन र हुइँयाबाट हाम्रै पार्टीका कयौं इमान्दार कामरेडहरू पनि प्रभावित भैरहनुभएको छ..’ कमरेड छविले घुमाएर अध्यक्षकै विरोधमा कुरा राखे ।
‘विचारमा प्रष्ट हुन नसकेकोले कार्यदिशा सहि नभएको तथा बढ्दो गैरसर्वहारा प्रवृत्तिले पार्टीको क्रान्तिकारी छवि एकप्रकारले पुरिँदै जान थालेको विषयमा सचिवालय बैठक कति गम्भिर हुनसक्यो कमरेड ?’ कमरेड विनयले प्रश्न राखे ।
‘पार्टीको शीर्ष नेतृत्वदेखि तलसम्मको पंक्तिले राजनैतिक काममा कति ध्यान दिन सक्यो ? व्यक्तिवादबाट जन्मेका गुट–उपगुट र झुण्डहरूको अनुगमन गर्न कति सक्यो ? निश्चित व्यक्तिहरूको स्वार्थ भजाउने औजारका रुपमा देखिएका गुट–उपगुटलाई निस्प्रभावी बनाउन पार्टीले के कस्ता रणनीति अख्तियार ग¥यो, केही बताउन सक्नु हुन्छ कमरेड ?’ कार्यालय सदस्यसमेत रहेका प्रदेश इन्चार्जतर्फ लक्षित गर्दै कमरेड प्रविनले भनाइ थपे ।
‘शक्ति केन्द्र बनाउने र घेराबन्दि गरेर आफ्नो अभिष्ट साँध्ने समूहहरू पार्टीमा धेरै पहिलादेखि नै सक्रिय हुन् । यसबारे अध्यक्ष लगायत शीर्ष नेताहरूको चासो नपुगेको हो की, आफ्नो स्वार्थका लागि आँखा चिम्लिएको हो बुझ्न सकिएन । सचिवालय बैठकले यसबाट पार लगाउने कुनै योजना गरेको छ त कामरेड ?’ कामरेड विभिषणले कुरो राखे ।
‘पार्टीभित्र धनवाद हावी छ । पार्टीमा भद्धा उपयोगितावाद हावी हुँदा पनि यसको नियमन र नियन्त्रणमा किन ध्यान छैन ? स्रोत साधनहरूको सहि र न्यायोचित बाँडफाँड किन हुँदैन ? पैसा नभएका कामरेडहरूको गुजाराप्रति ध्यान दिनु पर्नेमा पैसा भएकाहरू सँगको बसउठ र रसरंगमा मात्र किन जोड भइरहेको छ, के पार्टी बिग्रेकै हो वा बिगारेर विघटनमा लग्न थालिएको हो…?’ कामरेड दिनेशले कुरो राखे ।
‘समाजवाद कहाँबाट आउँछ कामरेड, त्यसका लागि समाजवादी संस्कृति र आचरण चाहिदँैन । समाजवाद निर्माणको आधार बारे ठोस निर्णय लिन किन सकिएन ? निरन्तर क्रान्तिको कुरो कहाँ पुग्यो ? के अब निश्चित व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदासाथ वर्ग संघर्षको अनिवार्य विषय पनि छुटाउन लागिएको हो ? धकाउँदै, फकाउँदै र गलाउँदै राजनीति गर्ने प्रतिक्रियावादी चिन्तन हावी गराउन खोजिएको हो ? कामरेड शीतलले प्रश्न गरे ।
‘हामी जस्ता पैसा नहुने मान्छे पार्टीभित्र पनि अपहेलित हुनुपर्ने र बाहिरको दुनीयामा त टिक्न पनि गाह्रो हुने भयो । जनवादी, समाजवादी र साम्यवादी आर्दशमा लागेका हामीहरू भित्रै रहन गाह्रो हुन्छ तब प्रतिस्पर्धीहरूसँगको चुनावमा कसरी सम्भव होला र ? चुनावलाई यस्तो बोझिलो र खर्चीलो बनाउनमा हामी जिम्मेवार छौँ की छैनौँ…?’ कामरेड प्रतापले सोधे ।
‘कुर्सीमा पुगेका र सत्ताको डाडुपन्यू चलाएका कामरेडहरूले स्रोतसाधनको उपयोगमा पुरै संसदवादी चरित्र देखाउनु भयो । आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नै स्थानीय तहमा आफू र आफन्तका लागि शक्ति लगाउनु चरम संसदवाद होइन् ?’ कामरेड आक्रोशले कुरो राखे ।
‘कामरेडहरू…निश्चय पनि तपाईहरूले उठाएका प्रश्न पेचिला र जायज पनि छन् । राष्ट्रियतालाई राम्रोसँग बुझाउन नसक्नु, सामाजिक संघसंस्थाहरूमा प्रभावकारी भूमिका देखाउन नसक्नु, साम, दाम, दण्ड भेदलाई अवलम्बन गर्न पनि नसक्नु र अरुलाई रोक्न पनि नसक्नु, नेताहरूको विलासीतालाई र आर्थिक अराजकता तलसम्म कपि हुँदै जानु, सामन्तवादी मनोवृत्ति हावी रहनुले हामी भित्र पनि समस्या र बाहिर पनि समस्यामा रहेको सत्य हो । तथापि हामी प्रष्ट विचार र सहि व्यवहारका अघि बढ्नै पर्दछ । पराजित उम्मेदवारको मनोबल बढाउन विशेष संगठनात्मक योजना ल्याउन जरुरी छ भने निर्वाचितहरूलाई बढि जनमुखी र उदाहरणीय देखाउनै पर्छ । संगठन र आचरण दुवैको पुनरावलोकनसहित हामी अगाडि बढ्नै पर्छ भनेका छौँ…।’ प्रमुख अतिथिले मन्तव्य राखे, सहभागीहरूले टाउको हल्लाए ।